Himilo – Maalinta Caalamiga ee Dadyowga taas oo raadisa inay diiradda saarto dardar-gelinta ah iyo muhiimadda xaaladaha dadyowga waxaa markii ugu horreysay dhistay Guddi QM u qaabilsanaa horumarinta barnaamijyada sannadkii 1989. Taniyo markaasna, maalintan waxaa loo asteeyey 11 July sannad kasta in looga dabaal-dego in ka badan 90 dal.
Qiyaasta hadda jirta ayaa qeexda in 83 Malyuun oo dad ah ay kusoo kordhaan dadyowga caalamka sannad kasta. Xittaa iyada oo aan la dafiri karin sida heerka dhalmada ee taranka qaar oo haweenka dunida kamid ah u liicayso, dadyowga caalamka waxaa la filayaa inay gaaraan 8.6 Bilyan sannadka 2030-ka – 9.8 bilyan sanadka 2050 iyo 11.2 bilyan sannadka 2100, marka loo eego saadaal isku dhaf ah oo la sameeyey.
Si kale marka loo dhigo, haddii laba qoys kasta ay dhalaan min hal cunug, way adag tahay in la helo da’dii iyaga badali lahayd. Haddii hal Milyan oo carruur ah la dhalay sannadkii 2006-da, way adag tahay in helo labo Milyan oo carruur ah marka la gaaro sannadka 2026-ka.
Sannado tirsamaya kaddibna, Yurub sida aan ognahay waxa ku adkaanaysa inay sii jirto. Haddana dadyowga Yurub ku nool maliicayaan, sababta oo ah waxaa ku badan soogalootiga sannad kasta kusii qulqulaya. Intooda badanna waa muhaajiriin kasoo hayaamay dalal Muslimiin ah.
Previous: Liverpool oo Thiago Alcantara keenaysa garoonka Anfield
Next: Man United oo wali rajeynaysa saxiixa Jadon Sancho